Isbedelka Hoggaanka Shaqaalaha Isbedelka Iskuduwaha Kooxaha Maaliyadda iyo Farshaxanka McKnight
Xarunta McKnight Foundation waxay ku dhawaaqi doontaa saaxiibtinimo laba jaaliyadood oo jecel dhamaadka Juun 2019. Rick Scott, madaxweyne ku xigeenka maaliyadda iyo waafaqsanaanta, iyo Vickie Benson, Agaasimaha barnaamijka farshaxanka, ayaa ku dhawaaqay inay doonayaan inay ka tagaan booskooda.
"Rick iyo Vickie waxay labaduba si wadajir ah uga qayb qaataan howlaha McKnight iyo inay noqdaan hoggaamiyeyaal wax ku ool ah," ayuu yidhi Kate Wolford, oo madaxweyne ah. "Waxaan uga mahadcelineynaa adeegyadii loo qoondeeyey sanado badan, waxaana u rajeyneynaa iyaga marka ay u diyaargaroobaan tartankooda xiga."
Rick Scott oo ku dhawaaqay inuu ka fariistay hawlgabkiisa
Rick Scott, oo ah xubin ka mid ah kooxda hoggaanka sare, ayaa ka fariisan doona 20 sano ka dib McKnight. Hay'adda McKnight Foundation waxay si qoto dheer uga mahadcelineysaa maamulka Scottship ee mabaadi'da aasaasiga ah. Wuxuu kormeerayaa meelo badan oo kakan, oo ay ku jiraan waaxda maaliyadda iyo waafaqsanaanta sharciga. Scott waxay bixisay hagid maaliyadeed iyo is-waafajin iyada oo loo marayo marxaladaha kala duwan ee dhaqaalaha iyo hogaaminta. Waxyaabihii badnaa ee uu sameeyay, wuxuu si dhow ula shaqeeyay madaxweynaha McKnight iyo guddiga maamulka si uu u dhiso kan ugu horeeya saameynta barnaamijka maalgelinta. Wuxuu hogaaminayey dadaalka hore ee aasaasiga ah ee lagu falanqeynayo kaalintiisa sida maalgeliye hay'adeed iyo in la galiyo maalgelin badan si loo hormariyo howlgalka.
Ka hor inta uusan ku biirin McKnight 1999, Scott wuxuu ahaa madaxa dhaqaalaha ee Tiyaatarka Guthrie iyo hay'ad adeegga aadanaha. Intaas ka hor, wuxuu ku qaatay 13 sano oo ka shaqeeya warshadaha kombiyuutarka.
Scott's hawlgabkiisa soo socdaa wuxuu abuuray fursada ah in la sameeyo isbeddel lagu sameeyo qaab-dhismeedka haatan ee dhismaha si uu si wanaagsan ugu daboolo baahidiisa hore. Iyada oo qayb ka ah isbedelka sanadka soo socda, kaalinta Bernadette Christiansen waa madaxweyne ku-xigeen ee howl-gallada ayaa ballaarin doona maamulidda waaxda maaliyadda iyo waafaqsanaanta sharciga, iyada oo loo bedeli doono madaxweyne ku-xigeenka maaliyadda iyo hawlgallada. Therese Casey, hadda maamulaha, wuxuu noqon doonaa agaasimaha dhaqaalaha. Iyadoo ka badan 30 sano waayo-aragnimada kala duwan ee doorarka kala duwan, Casey waa McKnight xubinta shaqaalaha ugu dheer ee adeegga.
Elizabeth McGeveran, oo hagayay saameynta maal-gashiga barnaamijka tan iyo 2014, wuxuu noqon doonaa agaasimaha maal-galinta. Tani waa meel cusub oo la abuuray oo loogu talagalay in lagu hormariyo ballanqaadka McKnight si uu u adeegsado kaalintiisa maalgaliye hay'adeed oo loogu talagalay raadinta saameynta. Qaab dhismeedka shaqaalaha cusub wuxuu kor u qaadayaa isdhexgalka buuxa ee saameynta ay ku leedahay habka maal-gelinta dhaqdhaqaaqa dhaqameed ee dhaqameed, wuxuuna u taagan yahay horumar weyn oo aasaas u ah aasaas qaran oo leh $ 2.3 bilyan.
Casey iyo McGeveran waxay qaadan doonaan doorarkooda cusub Janawari 1, 2019.
Vickie Benson ayaa tagi doonta Talada madax banaan
Vickie Benson waxa uu ahaa agaasimaha barnaamijka farshaxanka ee McKnight mudo 11 sano ah. Iyadoo hoggaankeeda, barnaamijku wuxuu ku nuuxnuuxsaday fannaaniinta shaqada iyo muhiimada muhiimka ah-farshaxanka, bulshada, dhaqanka, iyo dhaqaalaha - Minnesota. Isaga oo si dhow ula shaqeynaya asxaabteeda kooxda isboortiga iyo maalgelinta asxaabta, Benson waxa ay ka shaqeysey sidii loo abuuri lahaa isbaheysi iyo dhaqano kuwaas oo udub dhexaad u ah baahida iyo muhiimada sinaanta sinaanta ee deeqda.
Benson ayaa bixi doona 30 sano oo waayo-aragnimo xirfadeed ah oo ku saabsan doorarka kala duwan ee samaynta deeqda si ay uga faa'iideystaan fannaaniinta. Ka hor inta uusan ku biirin McKnight, waxay qabatay shaqooyin hormaris oo heer sare ah oo ay ka heleen National Endowment for Arts, Chamber Music America, iyo Jaamacadda Jerome. Waxay sidoo kale ka shaqeysay guddiga maamulka ee Grantmakers ee Farshaxanka laga bilaabo 2003 ilaa 2010, oo ay ku jiraan madax-guddoomiye guddoomiye laba sano.
Cutubka soo socda, Benson wuxuu bilaabi doonaa tijaabo madaxbannaan oo madax banaan si uu u bixiyo adeegyo tababaro ku saabsan horumarinta dhaqamada kala duwan iyo arrimaha sinnaanta. Waxay kaloo qorsheyneysaa inay ka shaqeyso mashaariicda muujinaya in jaaliyadu ay ku fiicnaadaan sababtoo ah farshaxan.
"Waxaan ahay mid xiiso leh in qeybo badani ay hadda fahmaan in farshaxannadu ay keenaan aragti, khibrad, aragtiyo gaar ah, iyo hogaaminta shaqada muhiimka ah ee bulshada," ayuu yiri Benson. "Waxaan sidoo kale ka mahadcelinayaa sida deeq-bixiyeyaasha, waxaan bilawnay inaan aqoonsanno in ay muhiim tahay in la beddelo caqabadaha maal-galinta iyo qaababka si ay u kordhiyaan taageerada dhaqaale ee farshaxanada farshaxanka iyo farshaxanada asaliga ah."
Mawduuca: Fanka & Dhaqanka, General McKnight, Maalgashiga Saameynta